दिनहुँ झ्यापझ्याप काटिन थाल्याे विद्युत्, दर्जनौं ठाउँमा आपूर्ति बन्द - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
दिनहुँ झ्यापझ्याप काटिन थाल्याे विद्युत्, दर्जनौं ठाउँमा आपूर्ति बन्द
फागुन ०१, २०७४ 1767 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुधार गर्दै आए पनि यसको परिणाम देखिएको छैन । सामान्य हुरी बतास वा पानी पर्नासाथ विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने पुरानो समस्या अझै ज्यूँका त्यूँ छ ।
उपत्यकाका भित्री सहरमा एक शताब्दीभन्दा पुरानो वितरण प्रणाली छ । यही कारण सामान्य हावा वा पानी पर्नासाथ तार चुँडिने, मिटर बिग्रने, ट्रान्सफर्मर बिग्रने वा जल्ने लगायत समस्या दोहोरिने गरेको छ ।
पछिल्ला वर्ष प्राधिकरणले उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुधारमा निकै मिहिनेत गरेको छ । पुरानो तार तथा पोल फेर्ने, मिटर, ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्ने, सबस्टेसन स्तरोन्नती गर्दै आएको छ । यत्ति गर्दा पनि विद्युत् नियमित कटौती हुने समस्या अन्त्य भएको छैन ।
काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा सोमबारमात्र दर्जन बढी ठाउँमा विद्युत् काटिएको थियो । मर्मत गरेर सुचारु गरेको २४ घन्टा नबित्दै पुनः त्यही क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ ।
प्राधिकरणले सोमबार पुतली सडक फिडरमा देखिएको समस्या समाधान गर्यो । र, आपूर्ति सुचारु गर्यो । गए राती सामान्य हावा चल्दा वा पानी परेका कारण यो फिडरमा पुनः समस्या आयो । यही कारण माइतीघर, बिजुलीबजार, थापाथली, बबरमहल, बानेश्वरलगायत ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ ।
यसैगरी, ठमेल र गल्कोपाखा क्षेत्रमा पनि अहिले विद्युत् काटिएको छ । त्यहाँको ११ केभी लाइनमा समस्या आउँदा लैनचौर मल्ल होटल, गल्कोपाखा दोबाटो, ठमेललगायत क्षेत्रमा आपूर्ति बन्द भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
केही घन्टामा पुतलीसडक फिडर मर्मत गरेर विद्युत् आपूर्ति सुचारु हुने रत्नपार्क नो लाइटका किरण बञ्जाराले बताए । उनका अनुसार लैनचौर र ठमेल क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु हुन कति समय लाग्छ भन्ने यकिन छैन ।